Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya UK iyo Haayadaha Xuquuqul Insaanka oo la kulmay Dowlada UK
Jaaliyada Ogadeniya UK iyo Haayadaha Xuquuqul Insaanka oo la kulmay Dowlada UK
Posted by ONA Admin	/ July 14, 2011
Guriga Baarlamaanka ee Wadanka UK (UK House Of Parlieament) ayaa saaka saacadu markay ahayd abbarihi 10:30 aroornimo waxa kulan looga hadlayo xadgudubyada dowlada Etiopia ka geysato Ogadeniya iyo Deeqda caalamiga ah ee ay ka hesho wadankan UK.
Shirkan waxaa qabanqaabadiisa lahaa Gudida Deeqaha Caalamiga ah ee Wadanka UK ee loo yaqaano International Development Commitee. Waxaana kasoo qeyb galay Haayada Arrimaha Dibada ee UK, Haayadaha Xuquuqul insaanka sida Human Rights Watch, Baarlamaan tira aad u badan ku yimid si ay u dhagaystaan doodan iyo Jaaliyada Somalida Ogadeniya oo ay isbarbar socdeen Qowmiyada Oromada iyo qowmiyadaha kale ee ethiopia ee ka tabanaya Dulmiga Guumeysiga Ethiopia.
Wakiilka kasocday Haayada Xuquuql Insaanka HRW ayaa waxa uu aad ugu dheeraday xasuuqa ka socda Ogadeniya isaga oo sheegay in dowlada Ethiopia ay sharciyaysatay cidkasta oo ka hadasha dhibatadas Ogadeniya inay ku shegto argagaxiso, waxa taas dheer ayuu yiri in Suxufiyiinta ree Galbeedka ah xattaa ay ku sheegto Argagaxiso islamarkaasna dhulka Ogadeniya ka mamnuucday dhamaanba warbaahinta iyo hayadaha Xuquuql isnaanka inay si madax banaan ugaso waramaan ama galaanba Ogadeniya.
Shirkan ayaa ahaa mid aad u heersareeyay waxa uuna daba socday dhaqdhaqaaq xoogan oo Jaaliyada somalida Ogadeniya ee Wadanka UK ay ku rabto in ay ku tusto Haayadaha caalamiga ah iyo kuwa dowliga ah ee wadankan UK dhibaatooyinka iyo xasuuqa ba’an ee ka jira Ogadeniya.
Waxa Jaaliyada Somalida Ogadeniya oo kaashanaysa Qowmiyadaha kale ee Ethiopia sida Oromada iyo Benshangulka iyo Gambellaha iyo haayadaha Xuquuql insaanka sida Human rights watch iyo Amnesty international ay shir caalami ah ku qabteen Xaafiska Amnesty International ee Magalada London bilowgii January 2011.
Shirkaas ayaa waxa lagu go’amiyay in Hayadaha Xuquuql insaanka iyo Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee UK iyo Qowmiyadaha kale ee Ku dulman Guumeysiga Ethiopia inay iska kaashadaan sidii ay uga dhaadhicin lahayeen Dowlada wadanka UK in laga jaro deeqda faraha badan ee ay siiso Ethiopia. Deeqdaas oo ay ku sheegeen in aysan gaarin dadkii loogu talo galay islamarkaasna dowlada Ethiopia u adeegsato Hub iyo cabudhin ay ku gummaado shacabka tabaaleysan.
Hadaba dhaq-dhaqaaqan ayaa waxa uu noqday mid hirgalay waxaana horraantii bishii May Kulan heer caalami ah oo u furan warbaahinta caalamka lagu qabtay guriga baarlamanka ee UK iyaga oo halkaas kula kulmay Gudida Deeqda Caalamiga ah. halkaasna su’aalo loogu soogudbiyay Gudidaas.
Gudida Deeqda caalamiga ah ee Wadanka UK ayaa balan qaaday in ay kulamo isdaba joog ah u qaban doonaan Hayadaha kala gadisan ee Baarlamanka si loo oggeysiiyo cabashooyinka kasoo yeraya haayadaha Xuquuqul insaanka. Sidoo kale waxa loo gudbiyay su’alihii Wasiirka deeqda Caalamiga ah ee Wadanka UK iyo Wasiirka Arrimaha Dibada ee UK. Kuwaas oo jawaabo wax ku ool ah kasoo bixiyay.
Hadaba shirkan maanta ka dhacay, ayaa ah kii ugu meeqaan sareeyay ee Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka UK ay ka qeyb gasho islamarkaasna ay ku gudbinayso cabashooyinkooda.
Gudomiyaha Jaaliyada London mudane Xuseen Geele ayaa ku tilmaamay kulankan mid horumar ah, waxaana muuqata in cadaadiskan hadii aan sii wadno aan ku guuleysan doono.
Ruqiya Xuseen Aabi oo ah Xoghayaha Ururka hayada Ogaden Women Relief ayaaa shirkan kasoo jeedisay hadalo wax ku ool ah oo cilmiyeysan halkaasna si diiran loogu soo dhaweeyay.
Marwo ruqiya ayaa noo sheegtay in Gudidan ay masuul ka yihiin inay daba galaan deeqaha ay wadankan UK siiso wadamada kale sidaas awgeedna awood ayay u leeyihiin inay joojiyaan Deeqda lasiiyo Ethiopia.
Hadda ka hor waxa ka jaaliyad ahaan cabashoyinkii aan gudbin jirnay ay suuro galiyeen in nidaam kale oo ah in dowlada Ethiopia toos loo siinin lacagta balse kililada lasiiyo. Waxa hadda aan ogaysiinayna in hadii kililada lacagta lasiiyo iyo hadii toos dowlada Ethiopia loo mariyo labadaba ay gacanta TPLF ay galayso deeqdaasi. Waayo TPLF waa xisbiga kaliya ee ka taliya Ethiopia marka arintaas waa in wax laga qabto.
Xamse Shariif oo ah xubinka u qaabilsan xiriirka shirarkan Jaaliyada somalida Ogadeniya ayaa ku howlan sidii loo abaabuli lahaa shirka kan xiga waxa uuna sheegay inay sii xoojin doonaan xiriirkan iskaashiga ah ee Jaaliyadu la yeelatay haayadaha Xuquuql insaanka iyo qowmiyadaha kale ee iyaguna ka cabanaya kaligi taliye Zenawi.
Shirkan waxaa looga hadlay Wariiyaasha u dhashay Sweden ay Dowlada Ethiopia ku qaffaashay dhulka Ogadeniya.
Waxa wasaarada Arrimaha Dibadu ay ka hadleen, inaysan tagin Ogadeniya, balse waqti hore ay tageen Qabridahare. waxayna aad uga garaabeen arrimo badan oo mediaha waqtigan ku habooneeyn.
Shirkan oo uu kasoo qeyb galay Gudoomiyaha Human Rights Watch u qaabilsan Xogbaadhida Mr Ben Rawlence ayaa isna kasoo jeediyay shirkan warbixino aad u qotto dheer oo uu si gaar ahaaneyd uga hadlay dhulka Ogadeniya.
shirkan ayaa la isku balansaday in lasameyo wada shaqeyn ka xoog badan mida hada jirta xidhiidhkana la joogteeyo.
Waxaana January 2012 la isugu imaan doona kulan aad u xoog badan oo madax ilaa heer wasiiro ay kasoo qeyb gali doonaan.
waa tallaabo qaali ah oo horay uu u qaaday halganku, dadaal heer sare ah ayay wadaan jaaliyadda reer Ogaadeeniya ee UK, guulaysta sii giijiya.
maansha allaah waa wax lagu farxo waana soo dhawaynaynaa talaaboyinka ay qaadayaan jaaliyadaha s. OGAADENYA ee aduunka waana guul inoo soo hoyatay umada guul gobanimo iyo isku tashi waa astaanteena
ALLAAHU AKBAR ,ALLAAHU AKBAR waa guul usoo hoyatay heer OGADENIA waayo waxaa bilaawaha la saaray gumaystaha arxanka daran ee ah malese ALLOOW JABI CADAAWAHA HEER OGADENIA AAMIIN,AAMIIN,AAMIIN.
Guul iyo gobonimo iin sha alaah reer mareykan hadaanu nahay aad iyo aad baan nooga fiican tihiin oo nooga fir fir coon tihiin ilaahey ha idin garab galo dad dhan baan xaqoodii usoo dhicineysaane guul
walahay waa guul iyo gobonim maashalaah siiwada